काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै - Ankuran Khabar
निषेधाज्ञा खुकु्लो भएसँगै भएको लापरबाहीको कारण संंक्रमण दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । उनले साउनदेखि यता संक्रमित संख्या दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।
बुधबार दैनिक प्रेस ब्रिफिङका क्रममा अहिले संक्रमण पुष्टि भएकाभन्दा बढी समुदायमा हुनसक्ने बताए । लक्षण नभएका, परीक्षण गर्न नगएकासहित अहिले देखिएको तथ्यांकभन्दा बढी समुदायमा हुन सक्ने उनको आंकलन छ ।
‘एकातिर हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंग्न गर्दै गइरहेका छौं, अर्कोतिर लक्षण नभएका संक्रमित परीक्षण गर्न जाने क्रम पनि कम छ,’ उनले भने ।
उनीहरू मध्येमा ७ देखि १० जना दैनिक भर्ना हुने गरेका छन् भने अस्पतालको २४ बेड क्षमताको आइसियुमा २१ जना भर्ना भएका छन् ।
डा. बाँस्तोलाका अनुसार संक्रमित हुनेहरूमा खोप केन्द्रमा खोप लगाउन लाइन बसेकाहरू मध्येबाट धेरै छन् । निषेधाज्ञासँगै नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंघन गर्दै जानुले संक्रमण पुन उकालो लागेको डा. बाँस्तोलाको तर्क छ ।
‘हामीले कडाइका साथ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेनौं भने यो थप भयावह हुन्छ,’ उनले भने । गत चौबिस घण्टामा नेपालमा परीक्षण भएका कुल १२ हजार ६ सय १६ वटा नमुनामध्येमा २८ सय २८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
थप संक्रमितसहित नेपालमा कुल संक्रमित संख्या ७ लाख २४ हजार ४ सय ५५ (एन्टिजेन परीक्षणसहित) छन् ।
तीमध्येमा दोस्रो लहरको अवधिभित्रमा मात्र ४ लाख ५९ हजार २१ जना संक्रमित भएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ६६ जना जनरल तथा एचडियुु शड्ढया भर्ना भएका छन् भने ३ सय ११ जना आइसियुमा भर्ना भएका छन् । तीमध्येमा १ सय ३८ जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
गत चौबिस घण्टामा थप ३० जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। थप मृतकसहित नेपालमा ९ हजार ९ हजार ६ सय ३७ जना पुगेका छन् । तीमध्येमा दोस्रो लहरको अवधिमा ६ हजार ३ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको हो ।
हाल नेपालमा कुल २६ हजार ८ सय ३२ जना सक्रिय संक्रमित छन् । तीमध्येमा २४ हजार ३ सय ४० जना होम आइसोलेसनमा छन् भने २४ सय ९२ जनाको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ ।
गम्भीर लक्षण भएका ६ सय २७ जनाको आइसियुमा र १ सय ७१ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।
आज ४३औं पुष्पलाल स्मृति दिवस